Cola Tree (ကိုလာပင်) - Hello Sayarwon
Cola Tree (ကိုလာပင်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Cola Tree (ကိုလာပင်)
Cola Tree (ကိုလာပင်) ကဘာလဲ။
ကိုလာပင် (Cola tree )ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cola tree ကို စိတ်ကျပျောက်ဆေး၊ ဆီးရွှင်ဆေး၊ ဝမ်းလျှောပျောက်ဆေးတွေ အနေနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို နှလုံးရောဂါ၊ မောပန်းခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ပျို့အန်ခြင်းနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ Cola tree ဟာ အနာကျက်ခြင်းကို အားပေးပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Cola ဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတွေ၊ စိတ်ကျခြင်းတွေနဲ့ နာတာရှည် ပင်ပန်းလွယ်ခြင်းတွေ၊ ညှိုးငယ်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ atonic diarrohoea၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်ခြင်းနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေအတွက် ခဏတာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကိုလာပင် (Cola tree ) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Cola tree ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Cola စေ့မှာ ကဖင်းဓါတ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကဖင်းဓါတ်ဟာ CNS စနစ်၊ နှလုံးနဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားပေးပါတယ်။
ကိုလာပင် (Cola tree )အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Cola tree ကို အသုံးမပြုခင် ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Cola tree ထုတ်ကုန်တွေ ကို အပူနဲ့ ရေငွေ့ရှိတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး အေးမြ ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှု မပြုလုပ်ခင် အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်း Cola စေ့ စားသုံးမှုကိုရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။
ကိုလာပင်(Cola tree ) က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ကလေးနို့တိုက်မိခင်တွေမှာ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေ မပြုလုပ်မချင်း Cola tree ကို မတိုက်သင့်ပါဘူး။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေတွေရှိရင် Cola tree သုံးစွဲမှုကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုလာပင် (Cola tree ) ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Cola tree ကနေ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
•	စိတ်ပူခြင်း၊ အိပ်မရခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
•	သွေးတိုးခြင်း၊ သွေးကျခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း
•	ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားမဝင်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ပါးစပ်အတွင်း အဝါရောင်ပြောင်းခြင်း
ကိုလာပင်(Cola tree ) ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Cola tree ဟာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆေးတွေ၊ တိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
•	Estrogen၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ
•	Furoguinolones, salicylates;
•	•Psychoanaleptic agents;
•	ကဖင်းပါသော ကော်ဖီ၊ ကိုလာ၊ လက်ဖက်ရည်၊ grapefruit ဖျော်ရည်
•	သတ္တုဓါတ် (calcium, magnesium).
ကိုလာပင်(Cola tree ) အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Cola tree ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုလာပင် (Cola tree ) က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Cola tree ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Cola စေ့၊ Cola ဝိုင်၊ fluid extract၊ ပေါင်ဒါပုံစံ၊ Solid extract၊ တင်ချာဆေးရည်
Print version. Page 193.
Cola nut. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 937-
cola%20nut.aspx?activeingredientid=937&activeingredientname=cola%20nut. Assessed August 7,2016.Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.
cola%20nut.aspx?activeingredientid=937&activeingredientname=cola%20nut. Assessed August 7,2016.